Ọhụrụ agbakwunyere maka MacOS 10.15.7 Catalina | Esi m mac
Ọhụrụ nkwado mgbakwunye maka MacOS 10.15.7 Catalina
Spanishnyaahụ oge Spanish, Apple wepụtara nsụgharị ikpeazụ nke macOS Big Sur, ụdị nke macOS nke a ga-ahapụ mgbe mechie mmemme ngosi nke ọhụụ ọhụrụ Mac ndokwa maka November 10. Site na mwepụta nke macOS Big Sur, kọmputa ndị okenye (tupu 2014) ahapụghị enweghị ike ịkwalite kọmpụta ha.
Ọ dabara nke ọma maka ndị ọrụ ahụ niile, Apple anaghị echefu ụdị ọhụụ kachasị maka Mac, MacOS Catalina, na weputara mmekorita, nke a ga - eji chụọ Catalina n'ọrụ ka ọ gwụla ma ewepụtara ọhụụ siri ike nke na - eme ka ọ hapụ patch, dịka ọ bụ ikpe a.
Dịka anyị nwere ike ịgụ na peeji nkwado Apple, mmelite mgbakwunye 10.15.7 kwachie atọ achọpụta flaws nche na-aga Google Project Zero team, ya mere Apple na-atụ aro ịwụnye ya ozugbo enwere ike. N'etiti ntụpọ atọ ndị a bụ nsogbu nke nwere ike ikwe ka mkpụrụedemede ejiri obi ọjọọ rụọ koodu iwu na-akwadoghị, yana ntụpọ kernel abụọ nwere ike ịhapụ ngwa ọjọọ iji mepụta koodu nwere ikike kernel ma kpughee ebe nchekwa.
A tọhapụrụ ọhụụ ọhụrụ a otu ọnwa mgbe emesịrị mmelite 10.15.7, mmelite nke mezigharị ọtụtụ njehie, otu n'ime ha metụtara ọrụ nke WMware, ngwa nke kwụsịrị ịrụ ọrụ na mwepụta nke mmelite gara aga yana onye nrụpụta a kwuru na ọ bụ nsogbu na ụdị kachasị ọhụrụ nke Apple wepụtara site na macOS Catalina.
Iji budata mmelite mgbakwunye ọhụrụ a, nke dịka otu ahụ si dị gburugburu 1 GB, anyị ga-enweta Mmasị sistemụ ma pịa Nwelite ngwanrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Ọhụrụ nkwado mgbakwunye maka MacOS 10.15.7 Catalina
Emechiri ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Apple iji nweta iPhone na HomePod mini ọhụrụ
Apple na-ezube imepụta Apple Apple Silicon MacBook site na February 2,5